Kutiza Simulator: Alpha inosunungurwa yeLinux (makamuri ekupunyuka) | Linux Vakapindwa muropa
Vanhu vazhinji vanoda makamuri ekupukunyuka, iwo nzvimbo dzavanogadzirisazve mamiriro ane dingindira rakasiyana kwazvo uye kwauchazofanira kuongorora zvimwe zvinoratidza kuti ubude. Asi, nedenda, pamwe idzo nzvimbo dzakapfigwa uye nemapoka evanhu mukati haisi iyo yakanyanya kunaka mamiriro. Naizvozvo, iwe unogona kugutsikana nemazita akadai Tiza Simulator.
Uyu mutambo wekufananidza wevhidhiyo werudzi urwu rwemakamuri unouya kune iyo Alfa, nerutsigiro rwe Linux, Mac uye Windows (Ichauya kumitambo yekunyaradza, VR uye mobiles gare gare). Zvese nekuda kwekuedza kwePine Studio uye kuti iwe unozokwanisa kuwana kwayo kuvhurwa gore rino kubva papuratifomu chiutsi kubva kuValve.
Mutambo wevhidhiyo unokuendesa kune chizvarwa chitsva chekutiza mukamuri. Escape Simulator inomiririra chitsva mukati meiyi genre, nezvose zvaunoda zvakanyanya nezve izvo chaizvo, kugona kuongorora nekugadzirisa mamwe mapuzzle kuti utize. Iwe unogona kunyange kufambisa fenicha, kutyora zvimwe zvinhu kuti utarise mukati, kana kunhonga mamwe malokhi. Zvese zvinhu kuzadzisa inotarisirwa kupera.
Mutambo wevhidhiyo unogona kutambidzwa wega, uye zvakare online vakawanda mukubatana maitiro. Uye zvinhu zvinonyanya kuzivikanwa ndezvi:
Makamuri gumi nemashanu akasiyana kuti uwane matarenda ako muEscape Simulator. Uye zvakare, ivo vakapatsanurwa kuita matatu mamiriro "Drifting in space", "Labyrinth of Egypt" uye "Edgewood Mansion". Yakagadzirwa neExitGames uye Enigmariumu.
Iyo simulator-based gameplay, saka zvinokutendera iwe kuti uite zvakati wandei zvinhu. Izvo hazvifananidzi mimwe mitambo mauri iwe unonyanya kushomeka. Pano unogona kubata, kukanda, kutyora, kufamba, nezvimwe.
Cooperative multiplayer modhi, kutamba senge mune chaiyo yekutiza mukamuri, neboka reshamwari dzinogona kukubatsira kugadzirisa dambudziko.
Uye zvakare, pachave nematanho epachivande kune avo vari kutsvaga rimwe dambudziko.
Nharaunda Escape Simulator yakagadzirirwa kuitira kuti dzimba nyowani dzivhurwe svondo rega rega, dzakagadzirwa nenharaunda, saka pachave nezvakawanda mune ramangwana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Kutiza Simulator: iyo Alpha inosunungurwa yeLinux